Ahoana ny fananganana fantsona fivarotana an-tserasera 5-dingana | Martech Zone
Ahoana ny fomba hametrahana fantsona fivarotana an-tserasera 5-dingana tsotra
Alakamisy, Jona 25, 2020 Alakamisy, Jona 25, 2020 Ryan Crozier
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, orinasa maro no nifindra tamin'ny marketing an-tserasera noho ny COVID-19. Izany dia namela orinasa maro sy orinasa madinidinika hitady paikady marketing nomerika mahomby, indrindra ireo orinasa niantehitra betsaka tamin'ny varotra tamin'ny alàlan'ny fivarotana biriky sy feta.
Raha manomboka misokatra indray ny trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany ary maro hafa, mazava ny lesona nianarana nandritra ny volana maromaro lasa izay - ny marketing an-tserasera dia tokony ho anisan'ny tetikadin'ny raharaham-barotra ankapobeny.
Ho an'ny sasany, mety hampatahotra izany satria ny varotra an-tserasera dia orinasa vaovao. Toa misy fitaovana, fantsona ary sehatra tsy manam-petra azon'ny tsirairay atao.
Amin'ity vahoaka ity dia hiteny aho hoe aza manahy - ny marketing an-tserasera dia tsy sarotra araka ny fahitana azy.
Raha ny marina dia tsy misy afa-tsy dingana dimy tsotra izay mila raisinao mba hanombohana amin'ny varotrao amin'ny Internet sy hampandehanana anao.
Ireo dingana 5
Manamboara andalana iray
Wireframe ny tranonkalanao
Mamorona mpamokatra firaka
Mamorona filaharana mailaka amin'ny varotra
Mamorona filaharana mailaka hikolokoloana
Ireto dingana dimy ireto dia ny sehatry ny varotra nosoratan'i Donald Miller sy ny Dr. JJ Peterson ao amin'ilay boky Tsotra ny varotra. Miaraka izy ireo dia mamorona ilay antsointsika hoe fantsom-pivarotana / varotra.
Na dia afaka mahazo famaritana amin'ny antsipiriany momba ny dingana tsirairay ao amin'ilay boky aza ianao dia hanasongadinana ny dingana tsirairay fotsiny aho, hanazava ny antony ilainao ny dingana manokana amin'ny marketing an-tserasera, ary hanome anao zavatra ilaina hatao izay azonao ampiharina eo noho eo. .
Vonona ny hanomboka ny varotrao amin'ny Internet? Andao hiroboka.
Dingana 1: Ilay milina tokana
Ny iray-volanao dia fehezanteny 2-3 tsotra izay mamaritra ny olana manampy ny mpanjifa hamaha, ny vahaolanao manoloana an'io olana io (izany hoe ny vokatrao / serivisinao), ary ny valiny andrasan'ny mpanjifa aorian'ny asa ataony aminao.
Ny antony hanombohantsika amin'ny liner iray dia noho ny fahaizany manovaova. Azonao atao ny mampihatra ny laharan-taribyo amin'ny sonia mailakao, karatra fandraharahana, fananana mailaka mivantana, tranokala ary fananana maro hafa. Tsy voafetra ho an'ny fananana ara-barotra amin'ny Internet ihany ianao.
Ny tanjon'ny solo-tokana dia tsotra - mahaliana ny marikao - ary izany dia atomboka amin'ny fiatombohany ny olanao mamaha ny mpanjifa. Raha tsy afaka mamaly ny fahalianan'ny mpanjifanao mety amin'ny marikao ianao, dia hifindra amin'ny faritra manaraka amin'ny fantsona izy ireo. Noho izany dia miasà ho mpanjifa afovoany rehefa manamboatra ny solo-nao iray!
Dingana fandraisana andraikitra - Amboary ny volanao iray amin'ny alàlan'ny filazanao ny olana atrehin'ny mpanjifanao, arahin'ny vahaolana omenao, ary ny valiny mety antenain'ny mpanjifanao aorinao rehefa manao raharaha miaraka aminao.
Dingana 2: Wireframe ny tranokalanao
Ny dingana manaraka amin'ny fantsom-pivarotanao dia ny famolavolana sy famolavolana tranonkala iray miasa. Fantatro fa toa mampatahotra kely izany fa afaka mandefa ivelany foana ny tranonkalanao mila amin'ny masoivoho iray ianao raha tsy vonona amin'izany.
Ny tranokalanao dia tokony ho tsotra sy mazava araka izay azo atao ary natao ho fitaovana fivarotana izany. Tompon'orinasa maro loatra no mihevitra ny tranonkalany ho tsy miovaova rehefa tena tokony hanome vola bebe kokoa ho anao izy io. Arakaraka ny maha kely kokoa ny rohy no tsara kokoa, ary indray, arakaraka ny itenenanao ny olana sedrain'ny mpanjifanao sy ny vahaolanao no mahatsara azy.
Ny antony ampidirinay tranonkala iray ao amin'ny fantsom-pivarotana dia satria mety ho izany no toerana voalohany anaovan'ny olona orinasa miaraka aminao amin'ny Internet. Raha vantany vao mamboraka ny fahalianan'izy ireo amin'ny volanao ianao, dia te hanome vaovao bebe kokoa amin'ny olona izahay ary hanetsika azy ireo hanakaiky kokoa ny varotra.
Dingana fandraisana andraikitra - Mandritra ny famolavolana ny tranokalanao dia mila mieritreritra amin'ny alàlan'ny antso-to-action voalohany ianao (CTA). Izany no fepetra tsy maintsy raisin'ny mpanjifa mety hiasa miaraka aminao. Mety ho zavatra tsotra toy ny "fividianana" na zavatra sarotra kokoa toa ny "mahazo tombana". Na inona na inona mifandraika amin'ny orinasanao. Mieritrereta amin'ny CTA voalohany anao ary hahatonga ny fizotran'ny famolavolana tranokalanao ho kely saina izany rehefa tonga eo ianao.
Dingana 3: Mamorona Generator-mitarika
Eto no ahitantsika ireo fantsom-pivarotana amin'ny fomba nentim-paharazana kokoa. Ny lead-generator anao dia fananana azo sintomina izay azon'ny mpanjifa mety ho takalon'ny adiresy mailaka azy ireo. Azoko antoka fa nahita ohatra an-taonina maro ianao tamin'ny internet.
Matetika tiako ny mamorona PDF tsotra na horonantsary fohy azon'ireo mpanjifa mety ho omena ahy raha manome ahy ny adiresy mailaka ry zareo. Ny hevitra sasany ho an'ny mpamokatra firaka dia mety ho resadresaka amina manam-pahaizana momba ny indostria, lisitra fanamarinana, na fomba fanaovana video. Anjaranao irery ary izay heverinao fa hanome lanja ny mpihaino kendrenao.
Ny tanjon'ny mpamokatra firaka dia ny fahazoana mombamomba ny fifandraisana mety ho an'ny mpanjifa. Azo inoana kokoa, raha misy misintona ny mpamokatra firakao, dia fanantenana tsara izy ireo ary mety liana amin'ny vokatrao / serivisinao. Ny fifanakalozana adiresy mailaka ho an'ny mpamokatra firakao dia dingana iray hafa ao amin'ny fantsom-pivarotana ary dingana iray manakaiky ny fividianana.
Dingana fandraisana andraikitra - Mampiasà atiny iray atiny mety ho sarobidy amin'ny mpihaino kendrenao ary hitaona azy ireo hanome anao ny adiresy mailakao. Tsy tokony ho sarotra izany, fa mila mifandanja sy sarobidy amin'ireo olona tadiavinao hivarotra.
Dingana 4: Mamorona Sequence Email Sales
Izahay izao dia miditra amin'ny ampahany mandeha amin'ny automatiquement an'ny fantsom-barotra. Ny filaharan'ny mailaky ny varotrao dia mailaka 5-7 izay nalefa tany amin'ny mety ho mpanjifanao raha vao misintona ny mpamokatra firakao izy ireo. Ireo dia azo alefa andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy misaraka amin'ny toetran'ny indostriao.
Ny mailakao voalohany dia tokony hifantoka amin'ny fandefasana ilay mpamorona lohan-kevitra nampanantenanao fa tsy misy zavatra hafa - ataovy tsotra. Avy eo ianao dia tokony hanana ny mailaka maro manaraka amin'ny filaharanao mifantoka amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fandresena ireo fanoherana iraisana amin'ny fividianana ny vokatrao / serivisinao. Ny mailaka farany amin'ny filaharan'ny varotra dia tokony ho mailaka mivarotra mivantana. Aza saro-kenatra - raha misy misintona ny mpamorona anao dia maniry izay anananao izy ireo. Mila mandresy lahatra kely fotsiny izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia manomboka mahita ny mpanjifa mety ho lasa mpanjifa isika. Ny antony ananantsika filaharana varotra mandeha ho azy dia mba tsy ho may ianao manandrana mivarotra hatrany amin'ny vinavinanao - azonao atao ny mametraka izany rehetra izany amin'ny autopilot. Ary ny tanjon'ny filaharan'ny varotrao dia manazava ny azy manokana - akatony ny fifanarahana!
Dingana fandraisana andraikitra - Eritrereto ireo mailaka 5-7 tadiavinao amin'ny filaharanao varotra (ao anatin'izany ny fandefasana ny lozisialy, ny fijoroana vavolombelona, ​​ny fandresena ny fanoherana, ary ny mailaka fivarotana mivantana) ary soraty izy ireo. Tsy mila lava na sarotra izy ireo - raha ny marina, ny kely kokoa dia tsara kokoa. Na izany aza, ny lalàna volamena dia ny hoe tsy maintsy misy ifandraisany sy mahaliana izy ireo.
Dingana 5: Mamorona Sequence Email Nurture
Ny filaharanao mailaka mikolokolo anao dia avy amin'ny mailaka 6-52 miankina amin'ny antony manosika anao sy ny gung-ho anao amin'ny marketing amin'ny mailaka. Ireo mailaka ireo dia matetika alefa isan-kerinandro ary mety ho avy amin'ny toro-hevitra, vaovao momba ny orinasa / orinasa, ny fomba hanaovana azy, na zavatra hafa heverinao fa sarobidy amin'ny mpihaino kendrenao.
Ny antony ananantsika filaharany fitaizana satria satria na dia aorian'ny fampidinana ny mpamokatra firakao ary handalo ny filaharan'ny varotrao aza ny mpanjifa sasany dia mety tsy vonona ny hividy. Tsy maninona. Na izany aza, tsy te ho very ireto mpanjifa mety hitranga ireto. Noho izany, mandefa mailaka azy ireo tsy tapaka ianao hampatsiahivana azy ireo fa ny vokatrao / serivisinao no vahaolana amin'ny olan'izy ireo.
Tsy maninona raha tsy mamaky na manokatra ny mailakao ny olona. Mbola sarobidy io filaharana io satria ny anaranao dia mipoitra ao anaty boaty mailaka ataon'izy ireo, izay matetika amin'ny findainy. Noho izany, ampahatsiahivina tsy an-kijanona ny fanantenana fa misy ny orinasanao.
Raha vantany vao mandalo ity fizotran'ny fitaizana ity ireo mpanjifa mety dia azonao atao ny mametraka azy ireo ao anaty filaharana hafa na mamindra azy ireo amin'ny filaharan'ny varotra hafa. Ny fahazoana antoka fa tsy hahavery olona ao amin'ny fantsom-pandrenesanao sy ny orinasao no avo lenta.
Dingana fandraisana andraikitra - Fantaro ny lohahevitra momba ny filaharanao mailaka hikolokoloana. Handefa torohevitra mifandraika amin'ny indostriao ve ianao? Ahoana no-ho ny? Vaovaon'ny orinasa? Na mety zavatra hafa. Manapa-kevitra ianao.
Any no anananao! Fantsona fivarotana 5-dingana tsotra azonao ampiharina amin'ny tenanao na miaraka amin'ny ekipanao.
Raha fanamby ny fifindrana amin'ny marketing amin'ny Internet, dia andramo ity rafitra tsotra ity. Mampanantena aho fa hahita valiny tsara kokoa noho ny tsy fananana paikady an-tserasera mihitsy.
Ary raha liana hianatra bebe kokoa momba ny orinasa namorona ity rafitry ny fantsom-pivarotana ity ianao, zahao StoryBrand.com. Izy ireo koa dia manana atrikasa mivantana ary atrikasa manokana hampianatra anao sy ny ekipanao amin'ny rafitra tsotra.
Raha te hanana fantsom-pivarotana noforonina ianao ho an'ny orinasanao manaraka ny fitsipiky ny StoryBrand, dia manatona ny ekipanay ao amin'ny Agency Boon.
Mifandraisa amin'i Agency Boon
Ity misy ny fantsom-pivarotanao sy ny fitomboan'ny orinasa.
Tags: tombon-tsoa ho an'ny masoivohodonald millermailakajr petersonmpamokatra firakafiraka-gropyTsotra ny varotramikolokolo ny filaharan'ny mailakairay-Linervarotra mailakatandroka fivarotanastorybrandwireframe
Ryan Crozier no mpanorina ny Agency Boon, masoivohom-barotra nomerika mifantoka amin'ny fanampiana ny olona hanao tsara amin'ny Internet. Manana traikefa amin'ny varotra 15+ taona izy ary nanampy amina orinasa am-polony hampihatra ny sehatry ny StoryBrand amin'ny marketing.
Fanitarana ny Digital Reach amin'ny Mobile-first, Post-Cookie World
Fahatakarana ireo API fanamarinana ny adiresy, fanamarinana ary ny fanamarinana ny fandefasana